मन्त्री बिना मगर भन्नुहुन्छ : भूमि-हीन जनतालाई जमिनको मालिक बनाउने सरकारको योजना छ । – yuwa Awaj
मन्त्री बिना मगर भन्नुहुन्छ : भूमि-हीन जनतालाई जमिनको मालिक बनाउने सरकारको योजना छ ।
मंग्सिर २६, २०७७ शुक्रबार 7
कञ्चनपुर : खानेपानी मन्त्री बिना मगरले कम्यू’निष्ट सरकारले नै भूमि-हीन जनतालाई जमिनको मालिक बनाउन योजना अघि सारेको बताएकी छन् ।
बिहीबार कञ्च’नपुरस्थित बेल’डाँडी गाँउपालिका प्र’शासनिक भवनको उ’द्घाटन गर्दै मन्त्री मगरले जनतालाई जमिनको मा’लिक बनाउन सरकारले कार्य अघि बढाएको बताएकी हुन् ।
जनता अब जमिनका मा’लिक बन्छन् :
मन्त्री मगरले सरकारले भूमि’हीन द’लित, भू’मिहीन सु’कुमबासी र अव्यवस्थित बसो’बासीलाई लाल’पू’र्जा दिने तयारी गरिरहेको बताइन । ‘हामी कम्यू’निष्टले चुना’वका बेला जनतासंग भूमि’हीन, सुकुम’बासी र अव्यव’स्थित बसो’बासीलाई लालपू’र्जा दिलाउँछौँ भनेका थियौं । अब त्यो कार्य कम्यूनिष्ट नेतृ”[त्वको सरकारले पूरा गर्छ ।’
बर्षौंदेखि जमिन नभएका, भू’मिहीन र भूमि भएर पनि स्वा’मित्व लिन नसकेका जनतालाई कम्यू’निष्ट नेतृ’त्वको सरकारले जमिनको मालिक बनाउने बताइन । ‘जनता अब जमिनमा मा’लिक बन्छन्, उनले भनिन, ‘यही सरकारले जनतालाई भू’मिको मालिक बनाउँछ ।’
मन्त्री मगरले त्यसका लागि संघीय सरकारले पहिलो च’रणमा देशभरीका सय पालि’कासंग सम्झौ’ताको कार्य अघि बढाइरहेको बताउँदै कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाँउपालिका सहितका पालिका त्यसमा समाबेश गरिएको बताइन ।
आरक्ष पीडि’तको समस्या स’माधान गर्ने प्रतिब’द्धता :
मन्त्री मगरले कञ्चनपुरको आरक्षपी’डितको समस्या पनि कम्यूनिष्ट ने’तृत्वकै सरकारले समाधान गर्ने प्रति’बद्धता जाहेर गरेकी छन् । ‘हामी आरक्ष पी’डितको समस्यामा जानकार छौँ, ‘उनले भनिन्, ‘पटक पटक पीडि’तसंगै म आफू र वनमन्त्री, भू’मिसुधारमन्त्रीले समेत प्रत्यक्ष भेटेरै समस्या बुझेका छौँ ।’
आरक्ष पी’डितको समस्या समा’धान हुने उनले प्र’ण गरिन् । मन्त्री मगरले नि’र्वाचन क्षेत्र सहित कञ्चनपुरको सम्बृद्धि र विकासका लागि प्रति’बद्ध रहेको बताउदै क्षेत्रको एकिकृत दिगो विकास र सम्बृ’द्धिका लागि तीनै सरकारले योजना अघि सारेको बताइन ।
‘अब निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ हिलोधु’लोमुक्त हुन्छ, ‘मन्त्री मगरले भनिन, ‘यस अघि यस निर्वा’चन क्षेत्रमा ग्रा’भिलिङ्ग समेत देख्न पाईदैन्थ्यो । अब सडक स्तरमा हामी तिनै तह लागि परेका छौँ ।’
मन्त्री मगरले बेलडाँ\_डीको कालि’किच ताल सहितको विकासका लागि योजना अघि सारिरहेको समेत बताएकी छन् ।
दीगो विकास र स’म्बृद्धिका लागि प्रतिबद्ध :
खानेपानीमन्त्री बिना मगरले निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि योज’नाबद्ध ढङगबाट अघि बढेको बताइन् । मन्त्री मगरले क्षेत्रको समग्र दी’गो विकास र सम्बृद्धिका लागि आफू प्रति’बद्ध रहेको बताएकी हुन् ।
मन्त्री मगरले आफूले चुना’वका बेला जनतासंग गरेका बाचा पूरा गर्ने र गरिरहेको समेत बताइन । ‘हिलो, धुलोयु’क्त रहेको नि’र्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को समग्र स्तर’बृद्धिका लागि संघीय सरकारका तर्फबाट पहल गर्छुू, ‘मन्त्री मगरले भनिन, ‘तीनै तहका सरकारबाट काम भइरहेका छन ।’
Prevसगरमाथाको नयाँ उचाइ सार्वजनिक भएको २४ घण्टापछि चीनले मुख खोल्यो, दियो यस्तो प्रतिक्रिया…हेर्नुहोस् ।
Nextअध्यक्ष ओलीलाई बैठकमा सहभागी हुन दबा’ब बढ्दै, नेकपा स्थायी कमिटी आइतबार बस्दै !
सभामुख अग्नि साप्कोटा भन्नुहुन्छ : मेरा लागि प्रचण्डभन्दा माथि संबिधान होइन !
नेपालका नागरिक विश्वकै राम्रा, देश स्वर्गः कतारी राजदूत…हेर्नुहोस् ।
जापानमा बस्ने सबैले को’रोनाको खोप निःशुल्क पाउने…हेर्नुहोस् ।
असार ७ पछि ‘स्मार्ट लकडाउन’ गरिने (1353)
गाई का’ट्दै गर्दा २ जना प’क्राउ : (707)
मेलम्ची बजारमा घरको छतमा मानिसहरु फसे, उद्दारमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर (420)
२.	असार ७ पछि ‘स्मार्ट लकडाउन’ गरिने (1353)
३.	गाई का’ट्दै गर्दा २ जना प’क्राउ : (707)
५.	मेलम्ची बजारमा घरको छतमा मानिसहरु फसे, उद्दारमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर (420)